China Cold Storage / Freezer / Refrigeration PVC Strip Curtains mpanamboatra sy mpamatsy | Great Wall
Curtains Strip Strip anti-bibikely
Takelaka fingotra FKM
Takelaka vita amin'ny kodiarana NR
Curtains Strip Strip / Colder / Refrigeration PVC Strip
Sakany: 200mm, 300mm, 400mm na fanao
Halavany: 50m na ​​Custom
Halavan'ny mari-pana: -40 ℃ ka hatramin'ny 50
Loko: Mangarahara, manga mazava, mavo, volomboasary sns
Lamina: lemaka, misy tadiny
Ny lambam-baravarankely polar PVC dia mijanona ho malefaka ihany na dia amin'ny 40 ° Celsius ambanin'ny zero aza, mamela ny olona mandalo, ny fiara ary ny entana mora foana ary misoroka tsara ny fahaverezan'ny rivotra mangatsiaka. Ny takelaka polar PVC dia safidy mety amin'ny fitsitsiana herinaratra satria tsy misy fiara mandeha amin'ny herinaratra. Ny lambam-baravarana polar dia tsy misy singa mihetsika ary tsy mamoaka tabataba mandritra ny serivisy. Cool strip dia noforonina avy amin'ny traikefa an-tsena ary voaporofo tamin'ny fitsapana tsy miankina hatramin'ny 50% ny vidin'ny angovo, raha manampy ny valizy mangatsiaka antsinjarany hahatratra ny fifehezana ny mari-pana ara-dalàna.
* Fitehirizana mangatsiaka
* Varavarana misy vata fampangatsiahana
* Kabinetra Chiller
* Efitra mangatsiaka
Fonosana: mazàna fonosina harona plastika no entinay rehefa avy natambatra 50m, ary avy eo nofonosina ny paleta hitsena ny toerana fitaterana. Azontsika atao ihany koa ny mamolavola boaty baoritra sy boaty tsy fanorana ho an'ny filàna manokana mba hisorohana ny fahasimbana amin'ny alàlan'ny fitaterana. Ho an'ny refy anatiny an'ny horonan-taratasy, 150mm ny fenontsika; izahay koa afaka mamolavola ho an'ny zavatra ilainao.
Ny lambam-baravarankely vita amin'ny fantsom-bokotra polar dia safidy ho an'ny fitehirizana mangatsiaka, ny vavahady mihodina, ny mpanisa ny latabatra, ny vata fampangatsiahana, ny efitrano mangatsiaka ary ny ankamaroan'ny toe-javatra fampangatsiahana entana. Matetika ny 50% mifampitohy, ny lalamby tsy miova vy & hook amin'ny tadiny - na 200 x 2mm na 300 x 3mm.
Manana fomba roa amin'ny ridao PVC strip, Smooth, ary Double Ribbed izahay. Ny lambam-baravarana ampiasaina dia miankina amin'ny fampiharana. Ny fantsom-bokotra PVC misy tadin-taolana avo roa heny dia misy manome fanamafisana ny faharetana ahafahan'izy ireo mahatanty fiatraikany miverimberina avy amin'ny fivezivezena mavesatra toy ny kamio forklift.
Miankina amin'ny habetsahan'ny mpanjifa, ny volan'ny sock an'ny orinasanay ary ny fandaharam-pamokarana baiko, amin'ny ankapobeny, ny baiko dia azo atolotra ao anatin'ny 15 andro.
Ho an'ny haben'ny tahiry, ny MOQ dia mety ho 50 KGS, fa ny vidin'ny vidin'ny entana sy ny vidin'ny fandefasana entana kosa dia ho avo kokoa, raha te hanana habe sy halavany manokana ianao, 500 KGS ny MOQ isaky ny habeny.
T / T na L / C eo imasony ho an'ny be dia be ny baiko
Azonao atao ve ny manao CO, Form E.Form F, Form A sns?
Eny, afaka ataontsika izy ireo raha mila izany ianao.
Ahoana no ataon'ny orinasa momba ny fifehezana kalitao?
Ny mpiasanay dia manome lanja indrindra ny fanaraha-maso kalitao hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany .Jiro fanaraha-maso ny kalitao tompon'andraikitra manokana amin'ny fanaraha-maso kalitao amin'ny fizahana isaky ny fizotrany. Alohan'ny fandefasana dia halefanay ny sary sy horonan-tsarobidinao, na afaka manatona izahay dia manana fanamarinana kalitao amin'ny tenanao, na avy amin'ny fikambanana mpanara-maso antoko fahatelo izay mifandray aminao.
Teo aloha: Takelaka vita amin'ny silipo
Manaraka: Takelaka vita amin'ny kodiarana NR
Curtains Pvc Strip mainty
Curtains Strip Room Pvc mangatsiaka
Curtains Pvc Strip indostrialy
Pvc Strip Curtains ho an'ny Ac